နည်းပြဘ၀ကို ကူးပြောင်းခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီး နာမည်ကျော်ကစားသမားဟောင်းများ
နည်းပြဘ၀ကို ကူးပြောင်းခဲ့ကြတဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ နာမည်ကျော် ကစားသမားဟောင်းများ
11 Oct 2018 . 3:39 PM
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ ဂန္ထ၀င်နောက်ခံလူ တယ်ရီ Terry ဟာ ဘောလုံးသမားဘ၀ကနေ အနားယူပြီး အက်စတွန်ဗီလာအသင်း လက်ထောက်နည်းပြအဖြစ် စတင်ဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ တယ်ရီမတိုင်ခင်က ဂန္ထ၀င် ကွင်းလယ်လူတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ လမ်းပတ် Lampard ဟာလည်း ဒါဘီအသင်းနဲ့အတူ နည်းပြဘ၀ကို ဖြတ်သန်းနေပါပြီ။
ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ နာမည်ကျော်ကစားသမား အတော်များများဟာ ဘောလုံးသမားဘ၀ကနေ အနားယူပြီးနောက်ပိုင်း နည်းပြအဖြစ် ဆက်လက်ရှင်သန်ခဲ့ပြီး တချို့ကလည်း အောင်မြင်မှု ရခဲ့သလို တချို့လည်း သာမန်အနေအထားသာ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ နည်းပြဘ၀ကို ကူးပြောင်းခဲ့တဲ့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ နာမည်ကျော် ကစားသမားတွေကတော့ . . .
ရုဒ်ဂူးလစ် Ruud Gullit
နယ်သာလန်ဂန္ထ၀င် ရုဒ်ဂူးလစ်ဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ ၁၉၉၅ ကနေ ၁၉၉၈ အထိ ကစားခဲ့ပြီး ဘောလုံးသမားဘ၀က အနားယူခဲ့တယ်။ ဂူးလစ်ဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ ၁၉၉၇ ကနေ ၁၉၉၈ ခုနှစ်အထိ ကစားသမား/နည်းပြအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့ပြီး FA ဖလားတစ်ကြိမ် ဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ချယ်လ်ဆီးကစားသမားဘ၀ အောင်မြင်မှု – FA ဖလား (1997) ၊ နည်းပြဘ၀အောင်မြင်မှု – FA ဖလား (1997)
ဗီယာလီ Gianluca Vialli
အီတလီ နာမည်ကျော်တိုက်စစ်မှူးကြီး ဗီယာလီကလည်း ဂူးလစ်လိုပဲ ချယ်လ်ဆီးအသင်းကို ကစားသမား/နည်းပြအဖြစ် ၁၉၉၈ ကနေ ၂၀၀၀ ခုနှစ်အထိ ကိုင်တွယ်ခဲ့တယ်။ သူ့လက်ထက်မှာတော့ ချယ်လ်ဆီးအသင်းဟာ အဓိက ဆုဖလားတွေရယူခဲ့ပြီး ကစားသမားဘ၀မှာရော နည်းပြဘ၀မှာပါ အောင်မြင်မှုရခဲ့တယ်လို့ သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။
ချယ်လ်ဆီးကစားသမားဘ၀ အောင်မြင်မှု – FA Cup: 1996–97၊ League Cup: 1997–98၊ UEFA Cup Winners’ Cup: 1997–98၊ UEFA Super Cup: 1998 ၊
နည်းပြဘ၀အောင်မြင်မှု – FA Cup: 1999–2000၊ League Cup: 1997–98၊ FA Charity Shield: 2000၊ UEFA Cup Winners’ Cup: 1997–98၊ UEFA Super Cup: 1998
ဒီမတ်တီယို Di Matteo
ဒီမတ်တီယိုဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက် ကစားသမားဘ၀မှာရော၊ နည်းပြဘ၀မှာပါ အောင်မြင်မှု အများဆုံးသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကစားသမားဘ၀မှာ FA ဖလား ၊ UEFA Cup Winners’ Cup ၊ ဥရောပစူပါဖလားတွေ ရယူခဲ့သလို အသင်းသမိုင်းမှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ချန်ပီယံလိဂ်ဖလား ဆွတ်ခူးနိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ခဲ့သူပါ။
ချယ်လ်ဆီးကစားသမားဘ၀ အောင်မြင်မှု – FA Cup: 1996–97, 1999–2000 ၊Football League Cup: 1997–98၊ FA Charity Shield: 2000၊ UEFA Cup Winners’ Cup: 1997–98
နည်းပြဘ၀အောင်မြင်မှု – FA Cup: 2011–12 ၊ UEFA Champions League: 2011–12
ပိုယက် Gus Poyet
ကစားသမားဘ၀မှာ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ကစားတတ်သူအဖြစ် လူသိများတဲ့ ပိုယက်ဟာ ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့အတူ အောင်မြင်မှုရခဲ့ပေမယ့် နည်းပြဘ၀မှာတော့ ရုန်းကန်နေရဆဲပါပဲ။ ဘရိုက်တန်အသင်းနဲ့အတူ League One အမှတ်ပေးဖလား ရခဲ့တာက လွဲရင် အောင်မြင်မှု ကြီးကြီးမားမား မရှိပါဘူး။ ဆန်းဒါးလန်း၊ ဘက်တစ်၊ ရှန်ဟိုင်းရှင်ဟွာ၊ ဘော်ဒိုးစတဲ့ လူသိများတဲ့အသင်းတွေကို ကိုင်တွယ်ခွင့်ရခဲ့ပေမယ့် နည်းပြသက်တမ်း မရှည်ဘဲ ရာထူးက ထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရတာ များပါတယ်။
ချယ်လ်ဆီးကစားသမားဘ၀ အောင်မြင်မှု – UEFA Cup Winners’ Cup: 1997–98 ၊ UEFA Super Cup: 1998 ၊ FA Cup: 1999–2000 ၊ FA Charity Shield: 2000
နည်းပြဘ၀အောင်မြင်မှု – Football League One (1): 2010–11
ချယ်လ်ဆီးအသင်းနဲ့အတူ အထင်ကရ အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီး ရယူခဲ့တဲ့ ကစားသမားစာရင်းထဲမှာ တစ်ဦးအပါအ၀င်ဖြစ်ပြီး ချယ်လ်ဆီးအသင်းရဲ့ သွင်းဂိုးအများဆုံး ကစားသမားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရာသီအစမှာ ဒါဘီအသင်းနဲ့အတူ နည်းပြလောကထဲ ၀င်ရောက်ခဲ့တဲ့ လမ်းပတ်ဟာ အောင်မြင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ် လျှောက်လှမ်းနိုင်မလား စောင့်ကြည့်ရပါဦးမယ်။
ဘောလုံးသမားဘ၀ကို အဆုံးသတ်ပြီး နည်းပြလောကထဲ ၀င်ရောက်ခဲ့သူတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ အန်ဆယ်လော့တီ Ancelotti ၊ ဂွါဒီယိုလာ Guardiola တို့လို စံချိန်တင်အောင်မြင်မှုတွေ ရယူခဲ့ကြသူတွေလည်း အများကြီးပါ။ အခု တယ်ရီ၊ လမ်းပတ်တို့လို ချယ်လ်ဆီးကစားသမားဟောင်းတွေရော ကစားသမားဘ၀တုန်းကလို နည်းပြဘ၀မှာလည်း ဆုဖလားတွေ ကိုင်မြှောက်နိုင်မလားဆိုတာ စိတ်ဝင်စားစရာပါပဲ။
Photo: Playbuzz,Pinterest,Evening Standard,Football Fancast,The Independent,The National
နညျးပွဘဝကို ကူးပွောငျးခဲ့ကွတဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ နာမညျကြျော ကစားသမားဟောငျးမြား
ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ ဂန်ထဝငျနောကျခံလူ တယျရီ Terry ဟာ ဘောလုံးသမားဘဝကနေ အနားယူပွီး အကျစတှနျဗီလာအသငျး လကျထောကျနညျးပွအဖွဈ စတငျဆောငျရှကျတော့မှာဖွဈပါတယျ။ တယျရီမတိုငျခငျက ဂန်ထဝငျ ကှငျးလယျလူတဈဦးဖွဈတဲ့ လမျးပတျ Lampard ဟာလညျး ဒါဘီအသငျးနဲ့အတူ နညျးပွဘဝကို ဖွတျသနျးနပေါပွီ။
ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ နာမညျကြျောကစားသမား အတျောမြားမြားဟာ ဘောလုံးသမားဘဝကနေ အနားယူပွီးနောကျပိုငျး နညျးပွအဖွဈ ဆကျလကျရှငျသနျခဲ့ပွီး တခြို့ကလညျး အောငျမွငျမှု ရခဲ့သလို တခြို့လညျး သာမနျအနအေထားသာ ပိုငျဆိုငျခဲ့တယျ။ နညျးပွဘဝကို ကူးပွောငျးခဲ့တဲ့ ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ နာမညျကြျော ကစားသမားတှကေတော့ . . .
ရုဒျဂူးလဈ Ruud Gullit
နယျသာလနျဂန်ထဝငျ ရုဒျဂူးလဈဟာ ခယျြလျဆီးအသငျးမှာ ၁၉၉၅ ကနေ ၁၉၉၈ အထိ ကစားခဲ့ပွီး ဘောလုံးသမားဘဝက အနားယူခဲ့တယျ။ ဂူးလဈဟာ ခယျြလျဆီးအသငျးမှာ ကစားနတေဲ့ ၁၉၉၇ ကနေ ၁၉၉၈ ခုနှဈအထိ ကစားသမား/နညျးပွအဖွဈ တာဝနျယူခဲ့ပွီး FA ဖလားတဈကွိမျ ဆှတျခူးနိုငျခဲ့ပါတယျ။
ခယျြလျဆီးကစားသမားဘ၀ အောငျမွငျမှု – FA ဖလား (1997) ၊ နညျးပွဘဝအောငျမွငျမှု – FA ဖလား (1997)
အီတလီ နာမညျကြျောတိုကျစဈမှူးကွီး ဗီယာလီကလညျး ဂူးလဈလိုပဲ ခယျြလျဆီးအသငျးကို ကစားသမား/နညျးပွအဖွဈ ၁၉၉၈ ကနေ ၂၀၀၀ ခုနှဈအထိ ကိုငျတှယျခဲ့တယျ။ သူ့လကျထကျမှာတော့ ခယျြလျဆီးအသငျးဟာ အဓိက ဆုဖလားတှရေယူခဲ့ပွီး ကစားသမားဘဝမှာရော နညျးပွဘဝမှာပါ အောငျမွငျမှုရခဲ့တယျလို့ သတျမှတျနိုငျပါတယျ။
ခယျြလျဆီးကစားသမားဘ၀ အောငျမွငျမှု – FA Cup: 1996–97၊ League Cup: 1997–98၊ UEFA Cup Winners’ Cup: 1997–98၊ UEFA Super Cup: 1998 ၊
နညျးပွဘဝအောငျမွငျမှု – FA Cup: 1999–2000၊ League Cup: 1997–98၊ FA Charity Shield: 2000၊ UEFA Cup Winners’ Cup: 1997–98၊ UEFA Super Cup: 1998
ဒီမတျတီယို Di Matteo
ဒီမတျတီယိုဟာ ခယျြလျဆီးအသငျးသမိုငျးတဈလြှောကျ ကစားသမားဘဝမှာရော၊ နညျးပွဘဝမှာပါ အောငျမွငျမှု အမြားဆုံးသူတဈယောကျဖွဈပါတယျ။ ကစားသမားဘဝမှာ FA ဖလား ၊ UEFA Cup Winners’ Cup ၊ ဥရောပစူပါဖလားတှေ ရယူခဲ့သလို အသငျးသမိုငျးမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ ခနျြပီယံလိဂျဖလား ဆှတျခူးနိုငျအောငျ စှမျးဆောငျခဲ့သူပါ။
ခယျြလျဆီးကစားသမားဘ၀ အောငျမွငျမှု – FA Cup: 1996–97, 1999–2000 ၊Football League Cup: 1997–98၊ FA Charity Shield: 2000၊ UEFA Cup Winners’ Cup: 1997–98
နညျးပွဘဝအောငျမွငျမှု – FA Cup: 2011–12 ၊ UEFA Champions League: 2011–12
ပိုယကျ Gus Poyet
ကစားသမားဘဝမှာ ကွမျးကွမျးတမျးတမျး ကစားတတျသူအဖွဈ လူသိမြားတဲ့ ပိုယကျဟာ ခယျြလျဆီးအသငျးနဲ့အတူ အောငျမွငျမှုရခဲ့ပမေယျ့ နညျးပွဘဝမှာတော့ ရုနျးကနျနရေဆဲပါပဲ။ ဘရိုကျတနျအသငျးနဲ့အတူ League One အမှတျပေးဖလား ရခဲ့တာက လှဲရငျ အောငျမွငျမှု ကွီးကွီးမားမား မရှိပါဘူး။ ဆနျးဒါးလနျး၊ ဘကျတဈ၊ ရှနျဟိုငျးရှငျဟှာ၊ ဘျောဒိုးစတဲ့ လူသိမြားတဲ့အသငျးတှကေို ကိုငျတှယျခှငျ့ရခဲ့ပမေယျ့ နညျးပွသကျတမျး မရှညျဘဲ ရာထူးက ထုတျပယျခံခဲ့ရတာ မြားပါတယျ။
ခယျြလျဆီးကစားသမားဘ၀ အောငျမွငျမှု – UEFA Cup Winners’ Cup: 1997–98 ၊ UEFA Super Cup: 1998 ၊ FA Cup: 1999–2000 ၊ FA Charity Shield: 2000
နညျးပွဘဝအောငျမွငျမှု – Football League One (1): 2010–11
ခယျြလျဆီးအသငျးနဲ့အတူ အထငျကရ အောငျမွငျမှုတှေ အမြားကွီး ရယူခဲ့တဲ့ ကစားသမားစာရငျးထဲမှာ တဈဦးအပါအဝငျဖွဈပွီး ခယျြလျဆီးအသငျးရဲ့ သှငျးဂိုးအမြားဆုံး ကစားသမားလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒီရာသီအစမှာ ဒါဘီအသငျးနဲ့အတူ နညျးပွလောကထဲ ဝငျရောကျခဲ့တဲ့ လမျးပတျဟာ အောငျမွငျတဲ့လမျးကွောငျးပျေါ လြှောကျလှမျးနိုငျမလား စောငျ့ကွညျ့ရပါဦးမယျ။
ဘောလုံးသမားဘဝကို အဆုံးသတျပွီး နညျးပွလောကထဲ ဝငျရောကျခဲ့သူတှေ အမြားကွီးရှိခဲ့ပါတယျ။ အနျဆယျလော့တီ Ancelotti ၊ ဂှါဒီယိုလာ Guardiola တို့လို စံခြိနျတငျအောငျမွငျမှုတှေ ရယူခဲ့ကွသူတှလေညျး အမြားကွီးပါ။ အခု တယျရီ၊ လမျးပတျတို့လို ခယျြလျဆီးကစားသမားဟောငျးတှရေော ကစားသမားဘဝတုနျးကလို နညျးပွဘဝမှာလညျး ဆုဖလားတှေ ကိုငျမွှောကျနိုငျမလားဆိုတာ စိတျဝငျစားစရာပါပဲ။